Oxymoron साथ प्राविधिक मार्केटिंग Martech Zone
शनिबार, सेप्टेम्बर 22, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हाई स्कूलको बखत (र अहिले), म एकदम क्लास क्लाउन थिएँ।
मसँग एक बर्ष नाटकीय अंग्रेजी शिक्षक थिए - उनको नाम श्री मोर्गन थियो। श्री मोर्गनसँग मेरो धेरैजसो समय कक्षाकोठा बाहिर बित्थे किनभने म शेक्सपियरको सराहना गर्न सक्दिन। यसले श्री मोर्गनलाई पागल बनायो।
एक पटक जब श्री मोर्गनले सोन्कीको येल-ईश उच्चारणमा शेक्सपियरले हेमलेटमा कस्तो प्रकारको साहित्यिक तरिकाहरू प्रयोग गरे भनेर सोधे, तब मैले चिन्ताले मेरो हात बढायो।
श्री मोर्गनले भने, "हो, श्री कार?"
"Oxymorons", मैले जवाफ दिएँ।
"Oxymorons?" श्री मोर्गनलाई ताने, "तपाईलाई पनि थाहा छ अक्सीमरोन भनेको के हो, श्री कार्?"
"निश्चित!" मैले भनेँ, "यो अभिव्यक्तिमा एन्टिथेटिकल पदहरूको अंश हो, श्री मोर्गन।"
म सहि हुँदाहुँदै पनि श्री मोर्गन अझै मेरो हास्य भावको कदर गर्न सक्दैनन् र उनले मलाई ढोका देखाइदिए। यो कक्षाबाट एकदम हाँसेको थियो (मेरो मुखबाट आउने बहु-अक्षांश शब्दहरू सुनेको प्रारंभिक हाँसो पछि)।
मैले अक्सीमोरोनको परिभाषा कहिल्यै बिर्सेको छैन ... र म उनीहरूको अत्यधिक र, सायद, बढ्दो प्रयोगमा आज मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा आश्चर्यचकित छु। यदि तपाईं साँच्चिकै राम्रो उत्पादन वा सेवा छ जस्तो लाग्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको बजार वा टेक्नोलोजी प्रस्तुतीकरणमा एउटा अक्सीमोरोनमा राख्नुहोस्। यो मान्छे आजकल यसलाई प्रेम देखिन्छ। वास्तवमा यी मध्ये केही अब गीकिपीडियामा छन्।
फुर्ती विकास - ती विकासकर्ताहरू हास्यास्पद छन्। रिलीज अझै ढिला छ।
अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस - यदि अनुप्रयोग आफैंमा।
कृत्रिम खुफिया - यो कृत्रिम छैन, यो वास्तविक हो।
ऊर्जा विकल्पहरू - उर्जाको एक मात्र विकल्प अन्धकार पदार्थ हो।
अनुकूल URL - मतलब युआरएल के हो?
इन्टरनेट रेडियो - यदि यो इन्टर्नेटमा छ भने यो रेडियो होईन
$ १० ल्यापटप - ऊर्जा? इन्टरनेट पहुँच?
नेट तटस्थताको - कोहि पनि सुन्नुहुन्छ Akamai or S3?
प्रयोगकर्ता इन्टरफेस - यो अझै पनि कम्प्युटरको लागि हो, म होइन।
खोज इञ्जिन मार्केटिंग - यो मार्केटिंग छैन (माफ गर्नुहोस्), यो प्लेसमेन्ट हो।
सिमलेस एकीकरण - यदि यो एकीकृत छ भने, यसको मतलब त्यहाँ सीम कतै छ।
तपाईको मनपर्ने अक्सीमेरोन कुन हो?